छोरोको वद्माशीले मीरा राजपुत हैरान र सोध्छिन् तपाईको वच्चाहरुले पनि त्यस्तै गर्छन् ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Hollywood/Bollywood/छोरोको वद्माशीले मीरा राजपुत हैरान र सोध्छिन् तपाईको वच्चाहरुले पनि त्यस्तै गर्छन् ?
वलिउड एक्टर शाहिद कपुरकी पत्नी मीरा राजपुत आफ्नो डेली रुटिनको खास कुराहरु आफ्नो प्रशंसकको विच साझा गरिरहन्छिन् । उनले एक भिडियोमा आमा भए पछि यस्तो मुश्किलको सामना पनि गर्नु पर्छ ? खासमा मीरा तयार हुनको लागि मेकअप गरिरहेकी थिईन् ।